ရှက်စရာ..ကောင်းတဲ့လုပ်ရပ် ..ဘုရားကို ..ဓာတ်​ပုံ ရိုက်​လို့ …​ငွေတစ်​​ထောင်​​ပေးလိုက်ရတဲ့ ဖြစ်ရပ် – ရှအေလငျး
ရှက်စရာ..ကောင်းတဲ့လုပ်ရပ် ..ဘုရားကို ..ဓာတ်​ပုံ ရိုက်​လို့ …​ငွေတစ်​​ထောင်​​ပေးလိုက်ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်
ဘု ရား ကို ဓာတ်​ပုံ မရိုက်​ရပါဘူး ….ရိုက်​ရင်​တစ်​​ထောင်​ကျပ်​ လှူ ရပါတယ်​လို့ ​ပြော​တော့ ငါးပိသံ​ရောသော ဘုရားလူကြီး ရဲ့ အင်္ဂလိပ်​ စကားကို နိူင်​ငံခြားသား ကြီးက နားမလည်​ပါ ။
ဒါ ဆို မရိုက်​​တော့ပါဘူးလို့ ​ပြော​အပြီး ကင်​မရာ သိမ်းလိုက်​​သော်​လည်း ဘုရားလူကြီးက ​လောဘ တတ်​ပြီး နိူင်​ငံခြားသားတိုင်း​ပေးရတာဘဲ မ​ပေးချင်​ လာမလည်း နဲ့ လို့ မြန်​မာလို့ ​ပြော​သောစကားကို နိူင်​ငံခြားသားကြီး က အသိကျ နားမလည်း​ပေမဲ့
ကင်​ မရာ အခွန်​မ​ဆောင်​သဖြင့်​ အပြစ်​​ပြော​နေတာကို ​တော့သိပါတယ်​ ။အချိန်​က မနက်​အ​စောကြီး ၄ နာရီ ခွဲ ​လောက်​လူအများ ကုသိုလ်​ ပွား​နေချိန်​….
ဘုရား လူကြီး စကား​ကြောင့်​ ဘေးအနာမှာရှိ​နေတဲ့ ကျွန်​​တော်​က အဲ့​ငွေတစ်​​ထောင်​ကျပ်​ကို ငါကူညီပါရ​စေလို့နိူင်​ငံခြားသားကြီး ထံခွင့်​​တောင်းလိုက်​တဲ့ အခါ…
ကျွန်​ ​တေ့ာ်​ကို မင်းရဲ့ကူညီချင်​တဲ့ စိတ်​ကို ​လေးစားပါတယ်​ ။ဒါ​ပေမဲ့ ငါမလို အပ်​ဘူး။မ​နေ့ ည​နေက မန်း​တောင်​​ပေါ်တတ်​တယ်​ ။
Entrance Tickets တစ်​​သောင်းကျပ်​ ဖြတ်​ပြီးတာ​တောင်​ မြန်​မာကျပ်​​ငွေတစ်​​ထောင်​ကို ​တောင်​​ပေါ်ထိပ်​က အပို ဆောင်​ရ​သေးတယ်​ ​ကျောက်​၀ိုင်း သွားတယ်​ …Entrance tickets တစ်​​သောင်းကျပ်​ရှိတာ​တောင်​Extra မြန်​မာ​ငွေ နှစ်​​ထော့င်​ငါးရာကျပ်​ ထပ်​​ပေးရတယ်​ ။
အ ခုမနက်​ Maharmuni ဘုရားကို လာဖူးတယ်​ …ဓာတ်​ပုံ ရိုက်​လို့​ငွေတစ်​​ထောင်​ကျပ်​ ပြန်​​တောင်းတယ်​။
ငါ လက်​မှတ်​ဖြတ်​တုန်းက Mandalay All Inculde လို့ ​ပြောတာ အခုတာဝန်​ယူပြီး ​ဖြေရှင်း​ပေးမည့်​ သူတစ်​​ယောက်​မှမရှိဘူး…စိတ်​မ​ကောင်းစရာ ဘဲ တစ်​ခြား ဘာသာများ ခရစ်​ရှန်​ , ဟိန္နူ , အစ်​စလန်​ , ဘုရား​ကျောင်းသွားလည်​ကြည့်​တယ်​။အားလုံးကြိုဆိုကြတယ်​ဘာသာ​ရေး အ​ကြောင်းပြပြီး အလှူမခံဘူး ။လူချင်​တဲ့ စိတ်​ရှိလျှင်​အလှူခံပုံးမှာ လှူလို့ ရတယ်​။
မြန်​ မာပြည်​မှာ နာမည်​ကြီးဘုရားများ ဘုရားကိုခုတုံးလုပ်​ပြီး လုပ်​စား​နေတဲ့လူတွေ အများကြီးဘဲလို့စိတ်​မ​ကောင်းစွာ ဖြင့် bye bye လို့ နူတ်ဆက်ခွာကျွန်​​တော်​၏ အ​​ရှေ့ မှ တိုးရစ်ကြီး ထွက်သွား​​လေသတည်း…
ဒီလို မမှန်​ကန်​သော လမ်းအသွယ်​သွယ်​ များ ​ကြောင့်​ Tourism ကြီး တိုးတတ်​ဖို့ ဆိုတာ ….ဟိုး အ​ဝေးကြီး မှာ ရှိ​နေဦးမှာပါ Tourism ​လောက ကြီးကိုအမှန်​ တကယ်​ တိုးတတ်​​စေချင်​တဲ့ ​စေတာနာဖြင့်​ တင်​ပြလိုက်​ပါသည်​ ခင်​ဗျာ !….။
ကျွန်​​တော်​တင်​​သော post အတွက်​ တာဝန်​ယူပါသည်​…..။
​လေးစားလျက်​ …. စိုးပိုင်​ပိုင်
ဘုရားကို ဓာတျ​ပုံ မရိုကျ​ရပါဘူး ….ရိုကျ​ရငျ​တဈ​​ထောငျ​ကပျြ​ လှူ ရပါတယျ​လို့ ​ပွော​တော့ ငါးပိသံ​ရောသော ဘုရားလူကွီး ရဲ့ အင်ျဂလိပျ​ စကားကို နိူငျ​ငံခွားသား ကွီးက နားမလညျ​ပါ ။
ဒါဆို မရိုကျ​​တော့ပါဘူးလို့ ​ပွော​အပွီး ကငျ​မရာ သိမျးလိုကျ​​သျော​လညျး ဘုရားလူကွီးက ​လောဘ တတျ​ပွီး နိူငျ​ငံခွားသားတိုငျး​ပေးရတာဘဲ မ​ပေးခငျြ​ လာမလညျး နဲ့ လို့ မွနျ​မာလို့ ​ပွော​သောစကားကို နိူငျ​ငံခွားသားကွီး က အသိကြ နားမလညျး​ပမေဲ့
ကငျ​မရာ အခှနျ​မ​ဆောငျ​သဖွငျ့​ အပွဈ​​ပွော​နတောကို ​တော့သိပါတယျ​ ။အခြိနျ​က မနကျ​အ​စောကွီး ၄ နာရီ ခှဲ ​လောကျ​လူအမြား ကုသိုလျ​ ပှား​နခြေိနျ​….
ဘုရားလူကွီး စကား​ကွောငျ့​ ဘေးအနာမှာရှိ​နတေဲ့ ကြှနျ​​တျော​က အဲ့​ငှတေဈ​​ထောငျ​ကပျြ​ကို ငါကူညီပါရ​စလေို့နိူငျ​ငံခွားသားကွီး ထံခှငျ့​​တောငျးလိုကျ​တဲ့ အခါ…
ကြှနျ​​တေ့ျာ​ကို မငျးရဲ့ကူညီခငျြ​တဲ့ စိတျ​ကို ​လေးစားပါတယျ​ ။ဒါ​ပမေဲ့ ငါမလို အပျ​ဘူး။မ​နေ့ ည​နကေ မနျး​တောငျ​​ပျေါတတျ​တယျ​
Entrance Tickets တဈ​​သောငျးကပျြ​ ဖွတျ​ပွီးတာ​တောငျ​ မွနျ​မာကပျြ​​ငှတေဈ​​ထောငျ​ကို ​တောငျ​​ပျေါထိပျ​က အပို ဆောငျ​ရ​သေးတယျ​ ​ကြောကျ​၀ိုငျး သှားတယျ​ …Entrance tickets တဈ​​သောငျးကပျြ​ရှိတာ​တောငျ​Extra မွနျ​မာ​ငှေ နှဈ​​ထော့ငျ​ငါးရာကပျြ​ ထပျ​​ပေးရတယျ​ ။
အခုမနကျ​ Maharmuni ဘုရားကို လာဖူးတယျ​ …ဓာတျ​ပုံ ရိုကျ​လို့​ငှတေဈ​​ထောငျ​ကပျြ​ ပွနျ​​တောငျးတယျ​။
ငါ လကျ​မှတျ​ဖွတျ​တုနျးက Mandalay All Inculde လို့ ​ပွောတာ အခုတာဝနျ​ယူပွီး ​ဖွရှေငျး​ပေးမညျ့​ သူတဈ​​ယောကျ​မှမရှိဘူး…စိတျ​မ​ကောငျးစရာ ဘဲ တဈ​ခွား ဘာသာမြား ခရဈ​ရှနျ​ , ဟိန်နူ , အဈ​စလနျ​ , ဘုရား​ကြောငျးသှားလညျ​ကွညျ့​တယျ​။အားလုံးကွိုဆိုကွတယျ​ဘာသာ​ရေး အ​ကွောငျးပွပွီး အလှူမခံဘူး ။လူခငျြ​တဲ့ စိတျ​ရှိလြှငျ​အလှူခံပုံးမှာ လှူလို့ ရတယျ​။
မွနျ​မာပွညျ​မှာ နာမညျ​ကွီးဘုရားမြား ဘုရားကိုခုတုံးလုပျ​ပွီး လုပျ​စား​နတေဲ့လူတှေ အမြားကွီးဘဲလို့စိတျ​မ​ကောငျးစှာ ဖွငျ့ bye bye လို့ နူတျဆကျခှာကြှနျ​​တျော​၏ အ​​ရှေ့ မှ တိုးရဈကွီး ထှကျသှား​​လသေတညျး…
ဒီလို မမှနျ​ကနျ​သော လမျးအသှယျ​သှယျ​ မြား ​ကွောငျ့​ Tourism ကွီး တိုးတတျ​ဖို့ ဆိုတာ ….ဟိုး အ​ဝေးကွီး မှာ ရှိ​နဦေးမှာပါ Tourism ​လောက ကွီးကိုအမှနျ​ တကယျ​ တိုးတတျ​​စခေငျြ​တဲ့ ​စတောနာဖွငျ့​ တငျ​ပွလိုကျ​ပါသညျ​ ခငျ​ဗြာ !….။
ကြှနျ​​တျော​တငျ​​သော post အတှကျ​ တာဝနျ​ယူပါသညျ​…..။
​လေးစားလကျြ​ …. စိုးပိုငျ​ပိုငျ
နာရီပိုင်းအတွင်း ကြည့်ရှုသူ သောင်းကျော်သွားလောက်အောင် ကြက်သီးထခဲ့ရတဲ့ ကျော်ကျော်ဗိုလ်ရဲ့ “ကျွန်တော်ရှက်လို့” ဆိုတဲ့ ဗီဒီယို
“မြစ်ဆုံကိုပဲ ကြည့်မနေပါနဲ့…. တောင်သမန်ကိုလည်း...